Rudder: Sisitimu yekumisikidza manejimendi uye software yekuongorora | Linux Vakapindwa muropa
chidzoreso mhinduro yemahara uye yakavhurwa sosi inotungamirwa kugadzirisa manejimendi uye kuongorora kuti ubatsire kugadzirisa masisitimu ekugadzirisa mune yakakura IT zvigadzirwa nenzira inodzorwa uye yakachengeteka.
chidzoreso ine server-padivi webhu interface yakanyorwa muScala uye wako akareruka emuno mumiriri akaisirwa pane yega yega maneja muchina yakanyorwa muC. Ine dhatabhesi yekumisikidza manejimendi, pamwe nekugona kwekuenderera kwekuongorora.
1 Nezve Rudder
2 Nyowani vhezheni yeRudder 4.3
3 Maitiro ekuisa Rudder paLinux?
La mutsauko pakati petsika yechinyakare manejimendi manejimendi yekushandisa uye Rudder ndiyo iyo shanduko dzinogona kuteedzerwa zvakasiyana isati yagadziriswa, ipapo tarisa ivo mushure mekushandisa kwavo, pakupedzisira girafu ivo uye chengetedza ivo nekufamba kwenguva.
Chero chipi zvacho chisingakodzere nyika yakanangwa chinodzokera kune chaicho-nguva chenjedzo, kugadzira mishumo yekukukurwa, kana kukonzeresa otomatiki kururamisa.
Izvi zvinoita chishandiso chakakodzera. kusangana nezvinetso zvezvigadzirwa zvekugadzira.
Kubva pane inoshanda maonero, Rudder inobvumira:
Manage iyo system base (govera SSH makiyi, gadzirisa DNS, gadzirisa vashandisi, gadzirisa chinzvimbo chebasa, seta mvumo pane maforodha uye mafaera, tanga mabasa, gadzirisa zvitupa, nezvimwe)
Isa, gadziridza uye gadzira zvinoshandiswa
ramba uchingoshandisa uye kuongorora chengetedzo marongero, kunyangwe ekunze zviyero (ISO 27001, PCI-DSS, ANSSI PSSI, nezvimwewo).
Iyo ine yakakwana webhu interface
Yakagadziriswa uye inoshandiswazve marongero
Tsika yemutemo mupepeti
Chinja chikumbiro / Validation
Muchidimbu, Rudder ndeye:
Iyo inoenderera yekumisikidza uye odhita yekushandisa manejimendi, iripo kubvira 2011;
Yemahara (kodhi iri pasi peGPL v3, zvinyorwa pasi peCC BY-SA 2.0, iine mamwe maraibhurari ari pasi peiyo Apache rezinesi);
Yakagadzirwa neserura iyo inotarisira kumisikidza uye kutevedzera mishumo (muScala) uye yekumisikidza mumiririri (muC), iyo inotarisira Debian, Ubuntu, RHEL / CentOS, SLES, Slackware uye AIX;
Inoshandiswa nezvakakura zvakakosha zvigadzirwa seCaisse d'Epargne, BMW kana Eutelsat;
Inonyanya kugadzirwa neNormation, iyo inopa akasiyana siyana masevhisi akatenderedza Rudder, senge kunyoreswa kunosanganisira yekumisikidza rutsigiro, kudzidziswa uye hunyanzvi, pamwe nekubhadharisa mapulagi ezvimwe zvinodiwa (kunyanya kumashini ekutsigira windows).
Nyowani vhezheni yeRudder 4.3
Mamwe mavhiki apfuura Rudder yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 4.3 Mushure meinopfuura hafu yegore rebudiriro tinogona kuwana pakati pekuvandudzwa uye kugadziridzwa kwakaitwa kune izvi tinogona kuratidza.
Rudder 4.3 inounza kuvandudzwa kwekutora kune ino edhita nekubvumira tsananguro yemiparamende yemitemo iyi.
Somuenzaniso, Izvo zvinokwanisika kutsanangura application yekumisikidza mutemo iyo inofunga nezve dhatabhesi iyo yekubatanidza.
Izvi zvinobvumidza masisitimu akaomarara kuti abviswe uye aite kuti asvike neyakareruka uye inogoneka tsika dhizaini
Yechipiri yakakosha budiriro ndiko kuunzwa kwekutumira uye kutumira kunze gadziriso mutemo weiyi edhari.
Inoita kuti zvive nyore kugovana aya marongero pakati pemaseva nevashandisi. Izvi zvakare zvinovhura mukana wepamberi chikuva chekugovana zvigadziriso marongero.
Kugona kutsva kwakawedzerwa kune zvakatemerwa hurongwa hwekugadziriswa inobvuma zviitiko zvakawanda pamushini mumwe chete (kuvapo kwesoftware package, nezvimwewo): imwe yekumisikidza pfuura pamberi pezviitiko zvekutanga uye imwe mushure mekupedzisira.
Iyo chaiyo yekushandisa kesi ndeye kutangazve sevhisi kamwechete pakupera kwekutarisa, semuenzaniso.
Asi zvakare inokutendera iwe kuti uite maatomu zviito kubva kune akati wandei akazvimirira marongero- Kana iwe uchida kuwedzera vashandisi vatatu kune iyo sudoers faira, iyo yekugadzirisa ichaitwa yekupedzisira, panguva imwe chete.
Maitiro ekuisa Rudder paLinux?
Ichi chishandiso chinotungamirwa mukushandiswa kwemaseva panodiwa chakasarudzika uye inofanirwawo kuiswa pamachini emuno (vatengi) ayo anozotarisirwa naRuuder kubva kune huru server.
Zveizvi zvakafanira kuti tishanyire chinotevera chinongedzo kwatinopihwa rairo dzakakodzera kuti tiise nekuimisa pamakomputa edu.
Vanogonawo kushanyira Iyi link kwekuyedzwa kwepamhepo kweiyi software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Rudder: Maitiro ekugadzirisa manejimendi uye software yekuongorora
Flacon: Chishandiso chekubvisa maturu edhiyo muLinux